Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex eyi-80 ene-Intanethi + - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex eyi-80 ene-Intanethi +
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguRob & Ingrid
URob & Ingrid yi-Superhost
Indlu entle kwaye eqaqambileyo ye65msq. kunye ne-terrace ye-15msq. ngombono wenkunzi yenkomo eyilwe nguPablo Ruiz Picasso. Ibekwe ecaleni kweMarina kuhambo lwemizuzu eyi-1 kuphela, indawo yokuzonwabisa eneendawo zokutyela, imivalo. Kukufutshane nevenkile zeziyobisi, iindawo zokumisa iibhasi, njl.
Ngemizuzu eyi-10-15 ukuya kumbindi wedolophu.
Ligumbi elithandekayo le-65m2 elinendawo yokutyela eyi-15m2 ejonge kwi-bullring eyilwe nguPablo Ruiz Picasso. Yinkunzi eyodwa kwihlabathi ngenxa yesimo sayo esingaqhelekanga.
- ikhitshi ene-oven microwave, i-toaster, umatshini wekhofi waseNtaliyane, i-kettle, ifriji, i-2-ring hob, umatshini wokuhlamba, njl kodwa AKUKHO I-OVEN;
- igumbi lokuhlala / igumbi lokutyela kunye nesofa, i-armchair kunye netafile yegumbi lokudlela;
- igumbi lokuhlambela eline-tray yokuhlamba, indawo yangasese, kunye nesitya;
- igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabini we-150cm
- i-terrace ye-15m2 kunye ne-2 yeprimiyamu yemigangatho ye-armchairs enye kunye ne-double one ekhululekile kakhulu kunye netafile yeti. I-terrace ijonge i-bullring.
Ungawonwabela amadama okuqubha amabini: enye yeyabantu abadala kunye neyeyabantwana.
Indlu ibekwe kakuhle, ngomzuzu omnye kuphela ukusuka eMarina apho uya kufumana iindawo zokutyela, ii-pubs kunye nemivalo. Yindawo enopopayi yase-Estepona (indawo yokuphumla esecaleni lolwandle).
Ngemizuzu emi-5 yokuhamba, uya kufikelela elunxwemeni kwaye ngemizuzu eyi-15, uya kufikelela kwidolophu endala.
Iivenkile ezinkulu zivaliwe kwiflethi: Supersol ngemizuzu emi-2 uhamba ecaleni kokujikeleza kunye nesikhephe, iSupercor ngomzuzu o-1 uhamba ngeMarina kwaye wavula yonke imihla nangeeholide zebhanki til 2am. Emva koko, kwindawo enye uneendawo zokumisa iibhasi, iiteksi kunye nezitolo zeziyobisi.
Indawo yokupaka yamaKomanisi ethetha ukuba ukuba kukho nayiphi na indawo yokupaka ungapaka apho. Ngaphandle koko, emva kwesakhiwo kukho indawo yokupaka yasimahla apho unokufumana indawo ngokulula.
Le ndlu ikwindawo exhanyulwa yimozulu entle eneentsuku ezingaphezu kwama-300 zokukhanya kwelanga ngonyaka.
4.81 · Izimvo eziyi-150
Ifumaneka eMarina, kufutshane nevenkile ezinkulu, iivenkile zeziyobisi (enye ingaphantsi kwemizuzu emibini uhamba, enye ihamba ngemizuzu emi-5), imivalo, ii-pubs, iindawo zokutyela, iimarike zesitrato rhoqo ngeCawe eMarina nangoLwesithathu kwisitrato esisecaleni kwendlu, indawo yokumisa ibhasi kunye neteksi kwi-100m ukusuka kwindlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Rob & Ingrid
Inombolo yomthetho: VFT/MA/04767